ရဲနည်| September 17, 2012 | Hits:11,735
မောင်ပု September 17, 2012 - 2:07 pm အမေရိကန်အနေနဲ့ အစားထိုးလောင်စာ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်ဆိုရင် အရှေ့အလည်ပိုင်းက မူဆလင်ကမ္ဘာကို ကျောခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Reply ပြည်သူ September 17, 2012 - 5:01 pm အခုကိစ္စဟာ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့တိုက်ရိုက်မပတ်သတ်ပါဘူး။ ဘယ်သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာရှောင်လွှဲမရတဲ့ကိစ္စပါ။ တာလီဘန်.အယ်ကိုင်းဒါးတွေရဲ့ကြိုတင်ကြံစီမှုတခုပါ။ စက်တင်ဘာကိုးရက်မှာဖြစ်တာကိုပဲကြည့်ပါ။ အဲဒီ ဗီဒီယိုနဲ့ နဂိုကမှသွေးကြွနေကြတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဆလင်တွေက အသုံးချခံလိုက်ရတာပါ။ အေးလေ..သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုက အဲဒီလိုဘာသာရေးအတွက် အသက်ပေးခဲ့ရရင် ကုသိုလ်ရတယ်၊သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်၊ ကောင်ကင်းဘုံရောက်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားတော့လည်းအခက်သား။
Reply SPS September 17, 2012 - 5:29 pm အမေရိကန်ပြည်သူတွေဘာမှစိတ်မခြောက်ခြားဘူး။ ဘာတွေလျှေက်ရေးနေတာလဲ။ အမေရိကန်ကပြောမရရင် အနုမြူဗုံးနဲ့ဆုံးမလုိုက်ယုံဘဲ။တစ်လုံးမရရင် နှစ်လုံး မလောက်သေးရင်အကုန်သုံးလုိုက်ယုံဘဲ။ရီပတ်ဘလီကင်တွေသာဆုိုရင်တွယ်ပလုိုက်တာကြာပြီ။
Reply Ko Kaung September 17, 2012 - 8:16 pm The script was written by an American – Egyptian and the film made in US, but why were British and German Embassies torched? Why were Churches in Niger ransacked? The real cause lies forgotten as usual that is sorry to be blunt but “Hostility”. This type of daily hostility to non-Muslim world always can spark over wrong or intentionally made ill treated information like what happened in Myanmar’ Rakhine province and Assam of India. Thanks to our great Lord’ great teaching, as giant Buddha Statues demolished in Afghanistan, our reactions went civilized and also beaproof of tolerance and love.
Reply ရွှေဘ September 18, 2012 - 4:54 am ” Like it or not we have to live with the fact”. Very well said. Even if you can afford to keep all of those Islamic members on one planet, say Mars, Christians on Venus, Jews on Pluto, they all are still keep killing each other for one sake or other.
Reply Myant Linn September 17, 2012 - 9:03 pm လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာကို လျော့နေတွက်ကြတဲ့ ရွှေပြေအေး သမားတွေ အတွက် နောက်ထပ် သင်ခန်းစာ ကောင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
Reply burmathwe September 18, 2012 - 12:38 am ဘာသာရေးကအရမ်း ပြော၇ ခက်ပါတယ်။ဘာသာေ၇း ဆိုတာ လူတိုင်းသူယုံကြည်ရာသက်ဝင်မှု့ တစ်ခုဘဲလေ။စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု့ ညာဏ်အများဆုံး ရှိတဲ့ လူတွေ က ပူလောင်သွေးဆူတဲ့ ဘာသာတွေ ကို ဘာဖြစ်လို့ ကိုးကွယ်ကြတာလဲးဆိုတာ မစဉ်းစားတတ်အောင်ဘဲ။ဘာသာေ၇း ကြောင့် အသက်အသေ ခံရင် ကောင်းကင်ရောက်တယ်ဆိုတာ….လောကကြီးမှာလူတောင်ရှိမှာ မပာုတ်တော့ ဘူ။လူတိုင်းကောင်းတဲ့ နေ၇ာရောက်ချင်ကြတာ ချည်းဘဲလေ။တွေးခေါ်မှု့ စဉ်းစားညာဏ် အမြင့် ဆုံးလူသားတွေဘဲ ဘယ်ဘာသာအေးချမ်းလဲ သေသေချာချာ သုံးသပ်ပြီး ကိုကွယ်ကြပါ။ဘယ်ဘုရား မှ သွေးဆူမှ ဘာသာတစ်ရားလို့ မပောာခဲ့ ပါဘူး။
Reply ငွေနှင်း September 18, 2012 - 10:41 am ဘယ်ဘာသာကမှ အကြမ်းဖက်ရမယ် သွေးဆူရမယ် လူသတ်ရမယ်လို့ မတိုက်တွန်းဘူး။ အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့သူက အကြမ်းဖက်မှာပဲ။ သူ့ကို ထောက်ခံတဲ့လူတွေ ပိုရအောင် ဘာသာရေးဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးရေးဖြစ်ဖြစ် အသုံးချပြီး ဆွယ်မှာပဲ။ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့လူတွေက ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပါချင်မှ ပါမယ်။ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု မဲ့တဲ့သူတွေ ပညာမတတ်တဲ့လူတွေကတော့ မျက်ကန်းပြီး ပါမှာပဲ။ သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေမှာ သောင်းဂဏန်းလောက် အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့လူတွေကို ကြည့်ပြီး ကျန်တဲ့ သန်းဂဏန်းကိုပါ သိမ်းကျုံးပြီး စွပ်စွဲတယ်ဆိုတာကိုလဲ နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။
Reply ချင့်ယုံ September 18, 2012 - 10:37 pm သူတို့ဘာသာမှာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝေ၀ဖန်မဆွေးနွေးရဘူး၊ဝေဖန်ဆွေးနွေးရင်
Reply ငွေနှင်း September 19, 2012 - 9:39 am အဲ့ဒီ့ဘာသာကို ရှင်မကိုးကွယ်ဘူး မယုံကြည်ဘူးဆိုမှတော့ သူတို့ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ရှင် ထဲထဲဝင်ဝင် နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်နားမလည် စိတ်မ၀င်စားတဲ့အရာကို ဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မလေ့လာပဲ အပေါ်ယံကောလဟာလကြားဖူးပြီး ယုံနေတဲ့သူကသာ ကိုယ့်ရဲ့ ဥာဏ်အရည်အသွေးနဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြန်စမ်းစစ်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ လူနည်းစု အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများလို့ ဆိုကတည်းက သူတို့အတွေးနဲ့ လုပ်ရပ်က အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်ချင်နေမှာပဲ။ ဒါကို ဘာသာရေးတခုလုံးကို စွဲသွင်းပြီး ပြောဆိုတယ်ဆိုရင် တခြားငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့ လူအများစုအပေါ် တရားမျှတတဲ့ စွပ်စွဲမှုမှ မဟုတ်တာ။ အဲ့ဒီ့ ဘာသာက အဲ့ဒီ့လိုသာ တကယ် ဟောထားမယ်ဆိုရင်ဘုံးအလုံးပေါင်း သန်းနဲ့ချီခွဲပြီးတော့ ဒီကဘာမှာ လူတောင် ကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။ သေချာလဲ စဉ်းစားပါဦး။
Reply Alidawdaw September 20, 2012 - 9:02 am 90 % of them are same.Everyone knew it.
Reply မြင်တတ်သူ September 19, 2012 - 12:41 pm ငွေနှင်းပြောတာ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အကုန်တော့မမှန်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ နိုင်ငံပေါင်းများစွာ တညီတညွတ်တည်း (မလုပ်မိရင်တာဝန်မကျေမှာစိုးတဲ့ပုံနဲ့) အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဆန္ဒပြရုံမက အူယားဖားယားဆူပူလှုပ်ရှားဖျက်ဆီး ကြတာကို တသက်နဲ့တကိုယ်ဒီတခါပဲတွေ့ဘူးတယ်။ ဆိုလိုတာကငွေနှင်းပြောတဲ့(ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး)အကြမ်းဖက်ချင်ကြတဲ့လူတွေ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်များရသလဲဆိုတာလဲ တွေးမိလို့ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတာက သူများနိုင်ငံရဲ့သံတမန်တွေကို သတ်ပစ်လိုက်ကြတာ အင်မတန်အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လှပါတယ်။ လစ်ဗျားအစိုးရကလည်းဘာ့ကြောင့် ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင် အဖြစ်ခံရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိတယ်။ နောက်တခု.. အီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အခုလိုအမေရိကန်သံတမန်တွေကို သတ်ပစ်တာမလွန်ဘူးလို့ပြောတာကြားရပြန်တယ်။ ဒါဟာဘာသဘောလည်းဆိုတာနားမလည်ပြန်ဘူး။ ဒီလိုလူမိုက်ပုံစံနဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာအံ့ပါရဲ့။ နှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် သံတမန်တွေကိုအရင်ပြန်လွှတ်ပြီးမှ ဖြစ်ကြရမှာမဟုတ်ပါလား။ ပြီးတော့ အာဖဂန်မှာ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်တွေကို တာလီဘန်တွေတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာ၊ ဒီလိုဖျက်ဆီးတာကို အာဖဂန်အစိုးရက လွှတ်ပေးထားတာ။ ဒီ့ပြင် ယနေ့အထိ ယူကျု့မှာ ရှာကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်… The Collapse of Buddhism ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုပ်ခတ်စော်ကားထားတာတွေ။ ဘယ်ဘာသာဝင်လုပ်တယ်တော့ မသိပါဘူး၊ အခုအချိန်ထိရှိနေသေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အထက်ကကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူကမှ ဆန္ဒပြ၊ဆူပူ၊လူသတ်တာတွေမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးဗျာ။ ဘာသာတရားဆိုတာ မေတ္တာတရားသာအရင်းခံမဟုတ်လား။ စော်ကားသူတွေအချိန်တန်ရင်သူ့စရိတ်နဲ့ သူသွားကြလိမ့်မယ်လို့သဘောထားပါတယ်။ အဲ…အဲဒီလိုခံရတဲ့နေရာမှာ ငွေနှင်းဆိုလိုတဲ့ ဘာသာဝင် တွေဆိုရင်တော့ တမျိုးတဖုံပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့(ခန့်မှန်းတာနော်၊စွပ်စွဲတာမဟုတ်ပါ။) ထင်မြင်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးးပါ။
Reply OD Sweet September 27, 2012 - 11:55 am နိုင်ငံပေါင်းမျာစွာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဆန်ဒပြပြီး အူယားဖားယား ဆူပူလှုပ်ရှားဖျက်ဆီးတာကို အခုမှ မြင်ဖူးကြားဖူးတယ်ဆိုရင် အခုတလောမှ သတင်းဖတ်ဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နိုင်ငံတွေမှာ ဘာလို့ဒီလောက်များရသလဲဆိုတော့ ကျမအထင် ပညာတတ်တအားနည်းတယ် လူအဖွဲ့အစည်းဖွံဖြိုးမှုနည်းတယ် အပြင်ကဘာနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ် ဒါတွေကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆန်ဒပြမှုထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ google လုပ်ကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိ လစ်ဗျားအစိုးရက ကဒါဖီပြုတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း တက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်သလို အမေရိကန်ထောက်ခံထားတဲ့အစိုးရပါ။ နောက်တခု.. အီရန်သမတနဲ့ Piers Morgan ရဲ့ CNN Intreview ကို နားထောင်ကြည့်ပါတယ်။ ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ အကြမ်းဖက်မှုဘယ်ဟာကို မဆိုရှုံချတယ် အမေရိကန်အနေနဲ့လဲ သူတို့ပါဝင်မှုကို ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး တတိယူရှုထောင့်ကပြောသွားတာလို့ နားလည်မိပါတယ်။ လူမိုက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာက ကိုယ်နားထောင်နဲ့ မီဒီယာနဲ့ ကိုယ့်သုံးသပ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။ ဗုဒ်ဓ ရုပ်ပွားတော်တွေကိုဖျက်ဆီးတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကပါ။ အဲ့ဒီ့နိုင်ငံကလဲ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာထဲက မထွက်နိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဒီကဘာရဲ့ ဘယ် century မှာ ကျန်ခဲ့တယ်တောင် သူတို့မသိဖြစ်နေချိန်မှာ ကျမတို့ civilized ဖြစ်တဲ့ လူတွေအနေနဲ့ ဒါကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးပြီး ရီနေမယ် ပြောနေမယ် ဝေဖန်နေမယ် တယောက်နဲ့ တယောက် သတ်ဖြတ်နေမယ်ဆို ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့အပြင် ခေတ်နောက်ပြန်ဆုတ်နေတော့မှာပေါ့။ ဘာသာတ၇ားတိုင်းက မေတ်တာအရင်းခံပါ။ စော်ကားသူတွေ ဘယ်စားရိတ်နဲ့ သွားတယ် မသွားတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့် ကျမအနေနဲ့တော့ အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်တယ်လို့မြင်ပြီး ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေက လူတိုင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့အရာကို မျှမျှတတ ရွေးချယ်သုံးသပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုပေါ်မှာမူတည် တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဦးနှောက်ပေးထားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မေတ်တာကို ဟောကြားခဲ့တယ်။ ဒါကိုလူတွေက ဦးနှောက်သုံးပြီး ဘယ်ဟာလုပ်သင့်တယ် ဘယ်ဟာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်။ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အေးချမ်းချင်တဲ့လူက အေးချမ်းစေမယ့် အလုပ်လုပ်သလို။ ပူလောင်စေမယ့် သူက ပူလောင်မယ့်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တိုင်းလဲ အေးချမ်းမှုမရှိသလို ခရစ်ယာန်တိုင်းလဲ မမျှတဘူး ဟိန်ဒူတိုင်းလဲ လူမျိုးရေးမခွဲခြားသလို မွတ်စလင်တိုင်းလဲ လူလိုက်သတ်မနေဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ သူတို့အပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ ကိုယ်နဲ့လဲ မဆိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် တတိယလူအနေနဲ့ အမြင်ကိုပြောတာ။ ကျေးဇူးပါ။ိ
Reply Burmese October 4, 2012 - 9:25 pm ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တိုင်းလဲ အေးချမ်းမှုမရှိသလို ခရစ်ယာန်တိုင်းလဲ မမျှတဘူး ဟိန်ဒူတိုင်းလဲ လူမျိုးရေးမခွဲခြားသလို မွတ်စလင်တိုင်းလဲ လူလိုက်သတ်မနေဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ သူတို့အပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ ကိုယ်နဲ့လဲ မဆိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် တတိယလူအနေနဲ့ အမြင်ကိုပြောတာ။ ကျေးဇူးပါ။ိ”"
Reply Burmese October 6, 2012 - 8:56 am (၁) မိုးကြိုးပစ်တာကိုထမ်းလက်နဲ့ကာခြင်း (၂) အကောင်မြင်နေတာကို အရိပ်ကိုရှာခိုင်းခြင်း (၃) လယ်ပြင်မှာဆင်သွားနေတာကို မတွေ့ပါဘူး (သို့) ဆင်မဟုတ်ပါ အခြားအကောင်သာဖြစ်သည်ဟုလွှဲပြောခြင်း……ပုံ…စတုတ္ထလူ။
Reply The fifth October 23, 2012 - 2:50 pm မွတ်ဆလင်တိုင်း လူလိုက်သတ်မနေပါဘူး။ မှန်ပါတယ်။
Reply NetStar 4st September 28, 2012 - 9:06 pm I amaBuddhist. I do not like the film Innocence of Muslim. But I can understand that America is too free to be controlled.